Isku darka midabaynta guriga
badalps.com waa degel internet ah oo sifiican u bixiya macluumaad kusaabsan isku xirnaanta midabaynta muuqaalka isla markiiba markii aad geliso qalabka midabaynta. Websaydhkan waxaa ku jira in kabadan 80 midab waxaana kugu adkaan karta inaad go aansato midab gaar ah masawirka gudahiisa. Si sharaf leh u xaadir, barta internet-ka ee khaldan ayaa soo saartay aalad soo qaadasho midab oo aad u isticmaali karto wakhti kasta oo aad rabto.
Markaad gudbiso oo aad geliso aaladda internetka, waxay kuxiran doontaa howsha helitaanka liiska midabada gudaha. Macluumaadka, natiijooyinka waxaa ku jira qaar ka mid ah faahfaahinta caawinta leh sida sawirka midabka, HEX, RGB, iyo magaca midabka sidoo kale. Tani waa goob cabsi badan maadaama aad ku ogaan karto xirmo midabyo gudahood ilbiriqsiyo gudahood aaladda. Marka, ku raaxayso sahaminta midabada qarsoon ee sawirkaaga masawirka.
Websaydhkan ayaa ku soo bandhigaya waxyaabo badan oo ku saabsan midabka dhamaantiin. Kaliya hal guji boggaan, waxaad ka heli kartaa sawir badan oo aad rabto. Waa kuwaan qaar ka mid ah waxyaabaha aad ka heli karto
Mid ka mid ah wuxuu ku saabsan yahay midabka. Waxaa jira Midab Aasaasi ah, Isku-dhafka Midabka, Cabbirka Midabka iyo Magaca Midabka. Midabka aasaasiga ahi wuxuu leeyahay saddex midab, waxaa jira casaan, buluug iyo jaale. Midabka aasaasiga ah, waxaad ka heli kartaa midabyo badan oo isku dhafan oo kugu dhiirrigeliyay dhammaan, kuwaas oo ah midabada sare. Tusaale ahaan, isku-darka casaanka iyo jaalaha wuxuu soo saari doonaa midab buluug ah, jaale iyo buluug isku dhafan ayaa soo saari doona midab cagaar, kan ugu dambeeyana waa casaan iyo buluug isku-dhafan ah waxay soo saari doonaan midab guduudan.
Iyadoo midabyo kale oo isku dhafan ay soo saari doonaan bilyan badan oo midab ah. Midabku sidoo kale wuxuu u qaybsamaa laba kooxood, oo kala ah midab diiran iyo midabyo qabow. Midabada diiran ayaa ah natiijada midabada qabow oo sii xumaatay. Midabada diirimaadka ah waxay walxaha u muuqdaan kuwo culus oo cufan. Midabada diiran waa casaan, oranji, dahab iyo bunni. In kasta oo dareenka midabka qabow uu waxyaabaha ka dhigayo mid sii muuqda oo dhalaalaya. Isku darka midabada qabow waa cagaar, guduud iyo buluug khafiif ah.
Isku-darka midabku waa natiijada hal-abuurka aadanaha iyo mala-awaalka. Midabbo kaladuwan ayaa leh aragti kala duwan oo qofka u gaar ah. Isku-dhafka midabku wuxuu nolosha ka dhigayaa midab badan oo qurux badan. In kabadan taasi, isku dhafka midabada ayaa soo saari kara midab aad u yaab badan. Waad ku dalban kartaa isku-darka midabaynta waxyaabaha agteena ku wareegsan, sida darbiga, midabka alaabta guriga, xulashada midabbada dharka, midabada ranjiyeynta, qurxinta iwm.